Sida loo arko sirta qarsoon ee dhibco ama xiddigood - Ikkaro
Inicio >> Software >> Sida loo arko sirta qarsoon ee dhibco ama xiddigood
Sida loo arko sirta qarsoon ee dhibco ama xiddigood
Waa hubaal mararka qaarkood Waad ilowday eray sir ah laakiin biraawsarkaagu wuu xusuustaa inkasta oo lagu qarinayo dhibco ama xiddigood aakhirkana waad ku dambaynaysaa inaad bedesho. Hagaag, waxaa jira habab dhowr ah oo lagu arki karo furahan sirta ah, waan ogahay labo, tag doorbidida biraawsarkaaga si aad u aragto meesha uu ku keydiyo furaha iyo tan labaad waa habka aan u baranayno mid aad iyo aad u fudud oo ka awood badan maxaa yeelay waxay noo ogolaaneysaa inaan aragno furaha sirta ah ee lagu keydiyey meelaha, taasi waa in la yiraahdo, in kasta oo aanan keydin oo dabcan, kuma jiro biraawsarkayaga, waan arki karnaa.
Tani waa waxtar badan haddii tusaale ahaan waxaad u shaqeysaa koox ahaan qofna wuxuu u dhigayaa API qaab, sida WordPress, sidan ayaad si dhakhso leh ugu soo ceshan kartaa si dib loogu isticmaalo meelo kale.
Waxaan kuu daayay fiidiyowga oo baraya sida loo sameeyo iyo hoosta waxaan ku sharxayaa labada hab ee qaab dhaqameed (kormeere iyo maareeyaha sirta ah ee biraawsarka)
Arag erayga sirta ah ee qarsoon (Habka ay leedahay soo gelinta)
Waxaan ku sameeyaa casharrada Firefox, laakiin haddii aad isticmaasho Chrome waa isku mid, kaliya eraybixinta miiska ayaa isbeddelay. In kasta oo goor dambe aan sharrax ka bixin doono sida loo arko furaha sirta ah ee ay keydiyayaashu badbaadiyeen, habkani waa ka sii dhammaystiran yahay maxaa yeelay wuxuu noo oggolaanayaa inaan ku aragno furayaasha sirta ah ee foomamka ku jira. Aan sharraxaad ka bixiyo, marka la isticmaalayo wordpress ama qoraallo kale waxaa jira beero leh qashin, iwm oo la ilaaliyo si aan ereyga sirta ahi u muuqan. Qaabkan waxaad awoodi doontaa inaad ku aragto waxa meesha ku kaydsan xitaa haddii aadan galin ama aad ku samaysay kombuyuutar kale.
Tallaabooyinku waa kuwa soo socda.
Waxaan aadeynaa halka eraygeyga sirta ahi yaalo oo waxaan ku gujineynaa badhanka midig ee qodobbada.
Waxaan heli doonnaa menu oo aan gujineynaa kormeerka cunsuriga. Kadibna Kormeeraha.
Waxaan laba jeer ku gujineynaa lambarka sirta ah ee nooca = lambarka sirta ah
oo waxaan ugu beddeleynaa qoraal si ay u sii ahaato nooca = qoraalka
Waana durba xilligan xaadirka ah waxaad arki doontaa erayga sirta ah ee qarsoonaa
Eeg ereyga sirta ah ee qarsoon adoo aadaya maareeyaha ereyga sirta ah
Hadaad isticmaasho Firefox en ku saabsan: doorbidista # asturnaanta waad arki doontaa tan
Waxaan gujineynaa sanduuqa Xisaabaadka kaydsan daaqadna kama soo muuqan doonto goobta, isticmaalaha iyo taariikhda goorta la reebay kaarka.
Ugu dambeyntiina waxaan siineynaa Muuji ereyada sirta ah oo waxaan arki doonaa lambarka sirta ah ee bog kasta. Aad u fudud, oo leh aagga raadinta ee kor ku xusan waxaan si fudud u heli karnaa goobta aan dooneyno.
Chrome waa isku mid aan iska dhigno chrome: goobaha // / passwords
Qaabkani wuxuu xalliyaa dhibaatada sirta ah ee aan kaydsanay, laakiin si ka duwan tan aan ku sharaxnay fiidiyowga, nama tusi karo ereyo sir ah ama API-yo ay kuwa kale geliyaan adeegyo caadi ah waana lagu qariyaa nooca berrinka iyo hantidiisa .
Ku adeegso wakiil
Tababarka Anaconda: Waa maxay, sida loo rakibo iyo sida loo isticmaalo
Sida loo beddelo miisaska laga bilaabo PDF-ka illaa Excel ama CSV oo ay la socdaan Tabula
Kumbuyuutarkeygu wuu daaraa laakiin waxba shaashadda kama muuqdaan
Categories Amniga aan rasmiga ahayn, Software Tigidhka tigidhka
1 faallo ku saabsan "Sida loo arko erayga sirta ah ee dhibco ama xiddigood"
Oktoobar 15, 2019 markay tahay 1:26 pm
Xeelad wanaagsan. Mahadsanid!